ERGAA DAAREKTARA OL'AANAA | Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaa Oromiyaa
Qabiisa ragaalee haala hawaasaa ammayyeessuf taateewwan bu’uuraa mudatan galmeessaa deemun barbaachisaadha. Taateewwan bu’uuraa dhimmoonni jedhaman dhaloota ykn lubbuun dhalachuu, gaa’ela raawwachuu, hiikkaa gaa’elaa, du’aa fi sababa du’aa, guddifachaa fi kkf yoo ta’an, taatewwan kanneen galmeesissuun bulchiinsaa ammayyaa’aa diriirsuuf, tajaajila hawaasummaa kennuuf, tajaajila eegumsa fayyaa fi barnootaa dhaqqabamaa taasisuuf, murtii qaamolee haqaa tilmaamamaa fi haqa qabeessa taasisuuf, mirga daa’immanii fi dubartootaa kabachiisuuf, fi bu’uura misoomaa ragaa qabatamaa irratti hundaa’un karoorsanii diriirsuuf akka ciicataatti fayyada.
Kana irraa ka’uun Ejensiin galmeessa ragaalee bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa taatewwan bu’uuraa uumamaa fi walitti dhufeenya hawaasaa keessatti mudatan yeroo seeraan taa’e keessatti galmeessee tajaajila uummataaf akka oolan taasisuuf hojii bal’aa hojjechaa turee jira, ammas hojjachaa jira. Sochii taasisaa ture keessaa gurmaa’insa Ejensichaa sadarkaa sadarkaan diriirsuu fi hojii gama hubannoo uumutiin raawwatamaa turee akka fakkeenyaatti kaasun ni danda’ama. Sirni galmeessa ragaalee bu’uuraa biyya keenyaafis ta’e naannoo keenyaaf haaraa waan ta’eef, hojimaaticha ummanni beekee akka itti fayyadamu gochuuf hojiin hubannoo uumuu murteessa dha.
Kana waan ta’eef, maloota adda addaatti fayyadamuun ummata keenya iddoo hunda jiraatuuf hubannoo kennaa turree jirra. Hojii hanga ammaatti hojjatameen bu’aa jajjabeessaan galmaa’us sadarkaa barbaadamu irra akka hin geenye marii hawaasa waliin taasisaa turree fi haala raawwii hojii keessaatti hubachuun danda’amee jira. Hanqina gama hubannootiin jiru furuuf maloota wal quunnamtii adda addaatti fayyadamuun bu’aa fi faayidaa galmeessa ragaalee bu’uuraa hawaasummaa ummata biraan gahuun barbaachisaa ta’a. Maloota kanneen keessaa tokko sarara marsariitii (web site) akka ta’e ni beekama.
Kanaaf, Ejensiin keenyas kaayyoo hundaa’eef, galmoota isaa fi mul’ata akkasumas faayidaalee galmeessi ragaalee bu’uura hawaasummaa akka biyyaattis ta’e akka naannoo keenyaatti qabu ilaalchisee sarara kanarra kaa’un fayyadamtootaaf dhiyeessee jira. Qaamoleen dhimmi ilaallatu kanuma beekun odeeffannoo barbaadan marsariitii mana hojii keenyaa kana irraa argachuu kan danda’an ta’uu ibsina.